Online Burma Library > Main Library > Activism and Advocacy (groups from Burma, solidarity groups, campaigns, publications) > Internet activism and resources
> Internet activism and resources
Internet activism and resources
Description/subject: "ABITSF - All Burma I.T Students' Front formed in 1998. Reformed ABITSF as ABITSU in December 2005 to have better productive strategy for new generation students from Burma. There are more than 50 I.T skilled personnel including 1988 generation students and new generation students.
ABITSU is to represent all the Burmese I.T Students who are struggling for Freedom and Human Rights within Burma, to stand against the Burmese Military Regime and remove the Military Dictatorship system, to generate more I.T skilled personnel and build the infrastructure forafuture democratic government of Burma, to obtain full freedom on the International Information High Way, and to get equal rights and opportunities for every nationality in Burma. Now, ABITSU is moving forward in various sectors collaboration with other democratic organizations in order to achieve our goals by providing following activities.
Currently, we are engaging in the following activities:
1. Information and Communication Technology Supports
3. I.T Training and Curriculum Development
5. Cyber Campaign
Any I.T personnel who would like to contribute the knowledge and share
your expertise to our Union, please feel free to join us and to contact us"
Description/subject: About bordermedia:
bordermedia isamedia organisation set up with the aim of catering for the growing need for IT development, training and consultancy for organisations and individuals working along the Thailand/Burma border...
Having spent some time in 2005 and 2006 working on various, mainly internet-related projects in and around the town of Mae Sot in Thailand,agroup of IT professionals from Australia and the UK decided to form an organisation with the aim of addressing this need...
web design / web development computer training IT consultancy project scoping funding proposals photography & multi-media... Whether you are an individual,asmall grass-roots organisation or an established international Non Government Organisation (NGO), the friendly team at bordermedia will be happy to help you...
From straight-forward advice on what strategy to pursue with your website & helping you to write up your funding proposal, right through to planning, developing and implementing complex database-driven web applications, or multi-media projects, don't be afraid to get in touch..."
Title: myanmarisp.com နည်းပညာနှင့် မြန်မာ့ ကွန်ရက် မော်ကွန်းတိုက်
Description/subject: BIT ပေါ်ပေါက်လာပုံ အကျဉ်း.............
ကျနော်တို့ မြန်မာ့ သတင်း ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာ အဖွဲ့ (Burma Information Technology Team - BIT) ဟာ အိန်ဒိယနိုင်ငံမှာ ခိုလှုံနေကြတဲ့ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လွတ်လပ်မှုကို မြတ်နိုးတဲ့ လူငယ် တစုနဲ့ စုဖွဲ့ထားတဲ့ အဖွဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ..... ကျနော်တို့ တတွဟော လူမျိုး အကွဲကွဲ အပြားပြား၊ ရည်ရွယ်ချက် အမျိုးမျိုး၊ ဖြတ်သန်းမှု အဖုံဖုံနဲ့ နေရပ် အစုံစုံတွေ ကနေ မြန်မာ့ ကွန်ပျူတာ နည်းပညာ (ICT) ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး၊ လွတ်လပ်ရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီရေး ဆိုတဲ့ တူညီတဲ့ ဦးတည်ချက်တွေ အပေါ်မှာ စုစည်း မိခဲ့ကြတဲ့ လူငယ် တစုပါ။ ကျနော်တို့ဟာ ၂၀၀၂ ခုနှစ်၊ နှစ်ဆန်းပိုင်းမှာ Burma Project/ Southeast Asia Initiative - OSI ရဲ့ အထောက်အပံ့နဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ကာနာတကာ ပြည်နယ်၊ ဘန်ဂလိုးမြို့က MAHITI Infotech Pvt. Ltd. မှာ ကွန်ပျုတာ ICT ပညာရပ်ကို ၆ လကြာ လေ့လာ ဆည်းပူး သင့်ယူခွင့် ရခဲ့ကြတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ကွန်ပျုတာ ICT... သင်တန်းကို အောင်အောင်မြင်မြင် ပြီးပြီးတဲ့ နောက်မှာ၊ ကျနော်တို့ တတွေဟာ Burma Project/ Southeast Asia Initiative - OSI ရဲ့ အထောက်အပံ့နဲ့ပဲ BIT ကို ဖွဲ့ခဲ့ကြပါတယ်။ ကျနော်တို့ဟာ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတတဲ့၊ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးပေါင်းစုံရဲ့ တန်းတူ အခွင့်အရေးကို အာမခံနိုင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော်သစ်ကြီး ပေါ်ပေါက်လာရေးကို ရည်မှန်းပြီး၊ ကျနော်တို့ ဝါသနာ ပါတဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ သတင်း ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးနဲ့ စစ်အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်ရေးကို တစိုက်မတ်မတ် ဦးတည် လုပ်ဆောင်မယ်လို့ အခိုင်အမာ ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ လူငယ်တစု ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ အနေနဲ့ အနာဂတ် ဒီမိုကရက်တစ် မြန်မာ့ လူ့ဘောင်မှာ နည်းပညာ အဆင့်အတန်း ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးကို ရည်ရွယ်ပြီး၊ ပြည်တွင်း ပြည်ပမှာ ရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတွေ၊ ဒီမိုကရေစီနဲ့ တိုင်းရင်သား တော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ လွတ်လပ်တဲ့ လူမှုဝန်ထမ်း အဖွဲ့အစည်းတွေ စတဲ့ လွတ်လပ်မှုနဲ့ ကွန်ပျုတာ နည်းပညာကို မြတ်နိုး ခုံမင်ကြတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့ အစည်းတွေကို ကျနော်တို့ သိမြင် နားလည်ခဲ့တဲ့ ကွန်ပျုတာ သတင်း ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အသိအမြင် တွေကို မျှဝေ ပေးသွားဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး ဖွဲ့စည်း ခဲ့ကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။... ဒါတင် မကသေးပါဘူး၊ ကျနော်တို့ အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်အာဏာရှင် စနစ် ဖျက်သိမ်းရေး၊ ဒီမိုကရေစီ ထွန်းကားရေးနဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု ပေါ်ထွန်းရေး အတွက် အထောက်အကူနဲ့ အားမာန် ဖြစ်စေမယ့် သတင်းတွေ၊ ဆောင်းပါးတွေ၊ ရသ စာစုတွေ၊ ဝတ်တုတိုတွေ၊ ကဗျာတွေ၊ မြန်မာ အီးဘွတ်တွေ (Burmese/ Myanmar eBooks) စတာတွကေိုလည်း အကျယ်ပြန့်ဆုံးနဲ့ အထိရောက်ဆုံး ဖြန့်ဝေသွားဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။
(၁) မြန်မာနိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး မှာ ဆောင်ရွက်ကြ မယ့် မြန်မာနိုင်ငံသား လူငယ်တွေ အတွက် သတင်း ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာ (ICT) အရည်အသွေးနဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုတွေ မြင့်မား လာစေဖို့။
(၂) ဒီမိုကရက်တစ် မြန်မာနိုင်ငံတော် တည်ဆောက်ချိန်မှာ အစိုးရတွေ၊ လွတ်လပ်တဲ့ လူမှု အဖွဲ့အစည်း တွေရဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို လက်တွေ့နဲ့ ဆိုင်တဲ့ သတင်း ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာ (ICT) လုပ်ငန်းတွေနဲ့ ပံ့ပိုး ကူညီ မြှင့်တင် သွားနိုင်ဖို့။
(၃) သတင်း ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာ (ICT) နဲ့ ဆိုင်တဲ့ တဦးချင်း စွမ်းဆောင်ရည်၊ လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ အစုအဖွဲ့ အလိုက် ကျွမ်းကျင်မှု စတာတွေကို လုပ်ဆောင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတွေ အကြား နည်းပညာ ကွာဟမှုကို လျော့ကျ သွားစေဖို့။
(၄) ပြည်တွင်း ပြည်ပမှာရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အကြား သတင်း ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာ (ICT) တွေ ပြန့်ပွား လာဖို့။
ဒါတွေကို ကျနော်တို့ စွမ်းဆောင် နိုင်သလောက် မခြွင်းမချန် ကြိုးစား အားထုတ် သွားမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း။
မြန်မာ့ သတင်း ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာ အဖွဲ့ (မသနဖ)
(Burma Information Technology Team, BIT)
Source/publisher: Burma Information Technology Team, BIT
Title: Citizen Journalism in Burma and the Legacy of Graham Spry
Description/subject: Abstract: "This report explores issues arising from the 2009 Graham Spry Memorial events
on the subject of citizen journalism in Burma, staging an encounter between aspects of the
work of Democratic Voice of Burma (DVB) and Graham Spry’s legacy asapolitically-engaged
intellectual and lobbyist. I discuss the role of DVB asa“citizen journalism” network embedded
ina“space of flows.” Particular emphasis is placed on the organization’s judicious use of “old”
and “new” media in the struggle for democracy in Burma. The report also takes up Nancy
Fraser’s notion of “scales of justice” to discuss the power of media flows inatransnational public
sphere and the limits of citizen journalism within pro-democracy movements in autocratic
regimes such as that of Burma. I conclude withadiscussion of the stakes of representation and
inclusion, notably for questions of gender and ethnic Keywords: Citizen journalism; Media and democracy; Transnational public sphere;
Democratic Voice of Burma; Graham Spry.....Résumé: "Dans ce rapport, j’explore des questions soulevées lors de la Conférence
commémorative Spry de 2009 sur le journalisme citoyen en Birmanie, rapprochant certains
aspects du travail de Democratic Voice of Burma (DVB) à l’héritage légué par Graham Spry
dans son rôle d’intellectuel et lobbyiste engagé. Je présente la fonction de DVB d’assurer un
réseau de journalistes citoyens situés dans un « espace des flux ». Ce faisant, je mets un
accent particulier sur l’utilisation judicieuse des nouveaux médias et des médias
traditionnels faite par DVB dans la lutte pour la démocratie en Birmanie. Je reprends aussi
l’idée de « balance de la justice » développée par Nancy Fraser afin de discuter du pouvoir
des flux médiatiques dans une sphère publique transnationale ainsi que des limites du
journalisme citoyen dans le cadre de mouvements démocratiques assujettis à des régimes
autocratiques comme celui de la Birmanie. Je conclus par un examen des enjeux de la
représentation et de l’inclusion, notamment par rapport aux questions de sexe, genre et
Mots clés: Journalisme citoyen; Médias et démocratie; Sphère publique transnationale;
Democratic Voice of Burma; Graham Spry
Author/creator: Julianne Pidduck
Source/publisher: Canadian Journal of Communication, Vol 35 (3)
Alternate URLs: http://www.cjc-online.ca/index.php/journal/article/view/2386/2188
"This study examines ways in which Burmese diasporic identities are formed and maintained, and
the importance of new media in this process. Political oppression in Burma, the experience of
exile and the importance of opposition movements in the borderlands make the Burmese
diasporaaunique and complex group. This study used tapoetethakot, an indigenous Karen
research methodology, to interact with fourteen participants in Auckland, exploring aspects of
new media use and identity maintenance.
Common among all participants wasatwin desire to share stories of suffering and to have that
pain recognised. This suffering is an important part of refugee identity and is also linked with
resistance against assimilation in New Zealand. Instead, participants try and maintain their
language and cultural practices, with the intent of returning toademocratic Burma in the future.
New media supports these processes, by providing participants with access to opposition media
reports of human rights abuses and suffering, through making cultural and linguistic artifacts
accessible and through providing an easy means of communication with friends and family in
Burma and the borderlands."
Title: Technology in the borderlands
Description/subject: Displaced Karen in the borderlands
new technology not only to
maintain connections with their
homeland but also to inform
Author/creator: Rachel Sharples
Format/size: pdf (Burmese, 233K; English, 372K)
Alternate URLs: http://www.fmreview.org/FMRpdfs/FMR30Burmese/24.pdf
Title: Burma Diaspora
Description/subject: Burma Diaspora ist ein Dokumentar-Spielfilm, der 2005 während eines 6-monatigen Aufenthaltes in den Karen-Gebieten realisiert wurde. Die Seite enthält viele Bilder, Videos und Hintergrundinformationen zu der Situation der Karen; documentary on the situation of the Karen; the site contains many pictures, videos and background information;